न्यूयोर्कमा भेटिएकी - नोमी - Vishwa News
11-Jul-2020 | २७ असार २०७७, शनिबार
न्यूयोर्कमा भेटिएकी – नोमी
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
यात्रानुभुती : अच्यूत सिग्देल
सिमसिमे पानीले निथ्रूक्क भिजेको थियो न्युयोर्क शहर । वेस्ट फोर स्ट्रिटमा हिप्पीहरू बबमार्ली स्टाईलमा शिववुटी उडाउँदै थिए । केमिकल मिसाएको घॉस र नानाथरीका हुक्का फ्लेवरले मान्छेका कपडापनि हल्का रेयाकुन फ़्लेवर पोखिएको भान हुन्थ्यो । टाउको दुखेर चिटचिट भएको जस्तो लाग्दै थियो ।
हातमा गितानेस सिग्रेटको बट्टा र डुप्वॉ लाईटर लिएर एक सुन्दर युवती आईन । पहेला दाँत र मैला लुगा तर विन्दास शैली । उनको हुलियाले उनी फ्रेन्च भएको अनुमान लगाउन गार्हो भएन । उनले नोमी भनिन् मैले जन सेपा, किस्कि से तु । ज सुई आक्युट भनें । उनले ओ लाला तुत् पार्ले फँसेज भनिन मैले वातावरणलाई अलि सहज बनाएँ । “जस्ट किडिङ, ए लिटिल बिट् वन्ली” भनें ।
बान्किलो मोहडा अग्लो कद, सयपत्रीले छरेको मुस्कान हल्का टाईटानिक फिल्मकी हिरोईन जस्ती । मैले नजिकै देखेको वा चिनेको जस्तै । कत्ति सजिलै मनमुटु मिले झैं हुन्छ, कसैकसैसँग ! मानौं हामीले सँगै रात बिताएका थियौं । कमसेकम डिनर या लञ्च त खाएकै हुनु पर्छ । मेरो मानसपटल झोछें गल्लीदेखि मासन गल्ली हुदै ज्याठा ठमेल र कालधारा दौडिदै थियो । कँही कतै छेक छन्दों मिलेन । दिमागलाई स्क्यानिङ गर्दै डिल्लिबजारको उकालो चढाएर फ्रान्सेली केन्द्रमा रोकें ।
उर्षिला, कविता, विपिन, सौकत, सौरभ, संकेत, रूचीहरूका प्रतिविम्ध पल्टिए । कल्पना धिमिरे मिस आईन । माथेमा सर सहपाठी उमेरका भएपनि हामी सर भन्थ्यौं । वीन्डिज, निरूलाजले मन पच्चिस बसन्तमा फर्कियो । अनायास कपिल टमोट सरको यादले मन अमिलो भयो । वाकवाकी आयो, झगडा सम्झायो । मेरो फ्रेन्च भाषामा एक्सपर्ट हुने सपना तुषारापात भएको याद दिलायो । लामो सुस्केरा फेरें । तामाको जगबाट पानी पिएँ र थोरै हल्का भएँ ।
लुकिङ मिररमा के हेरेको थिएँ ऑखा चार भै हाल्यो । उनले भनिन् “क्यान आई कम टु दि फ्रन्ट” ? मैले नो प्रोव्लम भने । लेट मी स्टप दि कार के भनेको थिएँ । उनले ‘आई कुड कम फ्रम हेअर ‘ भन्दै बिचबाट घुर्सिईन।
मेरो दिमाग एलिएन्स फ्रॉसेज भित्रको क्याफ्टेरियाटी कक्षाकोठामा प्रवेश गरिसकेको थियो । उदाउँदै गरेको नोभेम्वर महिनाको कोमल घाम एक २०-२१ बर्षको केटीको मिनिस्कट छिरेर भित्र पस्थ्यो । भर्खरै वि ए सक्याएर बिवाहको तयारीमा रहेका हामी बिध्यार्थी त्यो सुनौलो वातावरणको प्रतिक्षारत रहन्थ्यौं । सुनौलो रंगका उनका बदनमा पोखिएको विहानी लालिमाले हामी सबैलाई भुतुक्कै बनाउँथ्यो। सबैको ड्रिम गर्ल थिईन उनी – नोमी ।
मैले उनलाई जिस्क्याउदै भने चु नो मि, डे एलियन्स फँसेज दि क्यातमान्डु ?
त्यतिखेरसम्म मेरो हुलिया उनको दिमागमा घुसिसकेको रहेछ । मलाई जोडले अँगालो मारिन् । गाला तिर उनको चु च्वाँ लटरम्म बर्षियो । Visit Nepal 98 मा हामीले गरेको सहकार्य दोहरियो । उनले काठमाण्डू, पाटन र भक्तपूरको गल्ली गल्ली बयान गरिन ।
हामीले सँगै विताएको विम्पी, निरूलाजका कथाहरू दोहरिए । मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का लिन आएको फ्रेन्च कम्पनी र अफिस म्यानेजर माथेमा सरको सम्झना भयो । फ़ाईल बढाउन एक पटकमा पियनदेखि हाकिमसम्म एक एक हज़ार चढाउनु पर्ने । गिरिजा सरकारसँग कमिसन नमिलेर फ्रेन्च कम्पनी फर्केको घटनाको हामी साक्षात्कार नै थियौं । माथेमा सरको छोरीको बिवाहमा VVIP रोहमा ह्विस्की समातेको, गिरिजावावुले योङ्म्यान लेट्स चियर्स भन्दा हात कामेको । भारतीय पत्रकारले गिरिजा बाबुको अन्तरवार्ता लिन मलाई चाकडी गरेको । Club Dynasty गएको लगायतका सबै प्रसंग स्मृत भयो ।
एउटा गँजडी टाटूवालाको मायाजालमा फसेर हामी सबैको दिल तोडेको प्रसँग कोट्याएँ । उनले ‘बोल्ड फेसण्ड’ हामी टु बोरिङ पर्सनालिटी भएको बताईन । भिजिट नेपाल ११ मा पिसकोर मार्फत नेपाल जान खोजेको तर एजेन्सीले ४७०० यूएस डलर मागेकोले उनी न्युयोर्क झरेकी रहिछन् ।
न्युयोर्कले उनमा अनौठो बदलाव ल्याई दिएछ । गॉजा, हुक्का र अनेकों प्रजाती ड्रग्समा रमाउने । लिवर्टी जस्तै स्वतन्त्र । बिन्दास र निश्चल झरना जस्तै बग्न चाहने भईछन उनी । झण्डै तीस मिनेटको ड्राईभ पछि विलियम्स बर्गको युनियन पुल डिस्टिनेसन आईपुग्यो। उनले गाडी साईड लगाउन इसारा गरिन् । मलाई बाहिर आउन भनिन् । म बाहिर के आएको थिएँ । कसिलो अँगालोमा बेरि हालिन । पन्ध्र फिटको दूरीमा तिसौं केटीहरू भित्र पस्न लामबद्द थिए । सबैले पालैपालो अँगालो मारे किस गरेँ । फ़्लेवर फुल हुक्काको र शिववुटीको गन्धले म झण्डै ढल्न ढल्न लागेको थिएँ । उनीहरू सबै मिलेर मलाई उचाले Visit Nepal 2020 को सफलताको कामना गरेँ । अर्को साल राउण्ड अन्नपूर्ण जाने र मुक्तिनाथको ववमार्लि होटलमा अर्गानिक तान्ने सहमती भएको छ । हेरौं के हुन्छ !
समय न हो १२ बर्षमा खोला त फर्कन्छ भन्छन्…
दोश्रो बजारमा उतार चढाव एक विश्लेषण
स्थानीय तहको उपनिर्वानका लागि मनोनयन दर्ता आज
रुकुम घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई अमेरिकाबाट ४ लाख २० हजार रुपैंया सहयोग
सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा हराइरहेका २० जना अझै भेटिएनन्
नेपालमा अझै टरेन सलहको जोखिम, अर्को झुण्ड छिर्न सक्ने सम्भावना
म्याग्दी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या २० पुग्यो, अझै १३ वेपत्ता
कोरोना संक्रमणपछि १ सय १० दिन अस्पताल बसेका धार्मिक गुरुको जीवन मृत्‍यु बीचको डरलाग्दो संघर्षको कथा
अनलाइन कक्षामात्र लिने विदेशी विद्यार्थीले अमेरिकी भिषा फिर्ता